Deg Deg Ciidamada Gaarka u tababaran ee Itoobiya oo Weerero Qorshaysam ku qaaday Magaalada Maqale iyo meelo kale. – Xeernews24
Deg Deg Ciidamada Gaarka u tababaran ee Itoobiya oo Weerero Qorshaysam ku qaaday Magaalada Maqale iyo meelo kale.
6. Januar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Magaalooyinka waawayn ee is maamulka Tigreega waxaa 24-kii saac ee Lasoo dhaafay kajirtay xiisad ka dhalatay weerara Qorshaysan oo ciidamada Gaarka ah ee Itoobiya doonayeen inay ku soo Qabtaan saraakiil dambiyo loo daba socday.
Ilo wareed ku sugan magaalada Addis ababa ee xarunta dlak Itoobiya ayaa xaqiijiyay in cutubyo ka tirsan ciidamada Gaarka ah ee Itoobiya ay weeraro ka gaysteen dhawr Guri oo ku kala Yaala magaalooyinka Mekelle iyo Adwa, balse ay iska caabin xoogan kala Hortageen ciidamada is maamulka Tigreegu.
Sidda xogtu sheegayso Guryaha La weeraray ayaa la’aaminsanaa inay ku jiraan xubno uu kamid yahay Gen. Getachew Assafe, kuwaasi oo ku Eedaysan xasuuq dadwayne oo ay k agaysteen deegaamada Soomaalida, Oromada, Gambellaha, Beni-shangulka iyo Canfarta.
Xogta aanu helay ayaa sheegaysa in ciidamada Gaarka ah ee Hawlgalkan Fuliyay lagu khasbay inay Gabi ahaan ba Joojiyaan Hawlgalka, waxayna xogtu intaasi ku daraysaa in Laba Goobood oo midina Guri yahay midna Hoteel inuu iska Hor imaad Kooban ka dhacay, balse aan la Ogayn khasaaraha Rasmi ahaan ka dhashay.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Itoobiya ayaa dhowaan warbaahinta dawlada ka sheegay in is maamulka Tigreegu diiday inay soo dhiibaan Gen. Getachew iyo saraakiil kale oo ku Eedaysan dambiyo culus oo isugu Jira xasuuq Gabood Falo iyo boob Hantiyeed.
Ma’aha markii ugu Horaysay ee maamulka Abiy Ahmed ay is kuday ay ku doonayeen inay kusoo Qabtaan xubnaha ay Eryanayaan, balse 1-da bishii August ayaa is kuday siddan oo kale ay ku doonayeen in lagu soo Qab-qabto Getechew iyo xubna kale waxaa ka dhalatay Fadeexad kadib markii Tigreegu Gacanta ku dhigeen ciidankii Hawlgalka loo diray iyo 2- diyaaradood oo ay wateenba.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/soo-dhacay.png 167 302 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-06 14:44:192019-01-06 14:44:19Deg Deg Ciidamada Gaarka u tababaran ee Itoobiya oo Weerero Qorshaysam ku qaaday Magaalada Maqale iyo meelo kale.
Dhalinyaraddii Soomaaliyeed ee reer Diri-dhaba oo Bartilmaameed u noqday ciidamada... Daawo reer Xariirad oo ka gadoodsan cadaalad daro lagu sameeyey.